‘अनुवाद काठमाडौंका लागि मात्रै भएको छ’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
‘अनुवाद काठमाडौंका लागि मात्रै भएको छ’
काठमाडौं — नेपाली तथा हिमालयन अध्यन विषयमा केन्द्रित डा. माइकल हट युनिभर्सिटी अफ लन्डनको स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजका प्राध्यापक हुन् । हिजो र आजको नेपाली साहित्य, समाज तथा बदलिंदो समयमाथि अध्ययन–अनुसन्धान उनका रुचिका विषय हुन् ।
३० वर्षयता नेपाली भाषा–साहित्यका निरन्तरका अध्येता बनेका ६० वर्षीय हटले नेपाली साहित्यका केही प्रतिनिधि रचनाहरूको अनूदित कृतिसमेत निकालेका छन् । उनका ‘मोर्डन लिटरेरी नेपाली’ (१९९७), ‘द लाइफ अफ भूपी शेरचन’ (२०१०), ‘अनबिकमिङ सिटिजन्स’ (२००३), ‘टिच युवरसेल्फ नेपाली’ (२००३), ‘मुनामदन’ र ‘बसाइँ’ (अंग्रेजी अनुवाद) लगायतका कृति प्रकाशित छन् । पछिल्ला दिनमा काठमाडौंमा व्यस्त दैनिकी बिताइरहेका हट अहिले नेपालमा भूकम्प आएपछिको स्थितिलाई लिएर ‘आफ्टर द अर्थ भायोलेन्ट स्व’ नामको परियोजनामा सामूहिक अध्ययन–अनुसन्धानमा जुटेका छन् ।
नेपालमा भूकम्प आएपछिको साहित्यिक–सांस्कृतिक र सामाजिक यथास्थितिमा अध्यन थाल्नुभएको रहेछ । यो अध्यनको विशेषता के हो ?
हो, यो योजनामा मसहित जोन ह्वेप्टन, योगेश राज, राघवकिशोर, स्टेफिन लोटर, जीवन बानियासहितका व्यक्ति अध्ययनमा लागेका छौं । यसमा भूकम्पपछिको सांस्कृतिक र साहित्यिक सम्पदाको क्षतिमाथि विशेष अध्ययन हुनेछ । १९९० सालको भूकम्प क्षतिदेखिको अर्काइभ खोज्ने काम हुनेछ । जुन देशमा राजनीतिक संकट कायम छ र समाज आफैंमा निम्न आर्थिक स्थितिले गाँजिएको छ— त्यहाँ प्राकृतिक विपत्तिले अरूतिरभन्दा बढी असर पुर्‍याउँछ । त्यसको प्रमाणमा नेपाल उभिएको छ । नेपालको महाभूकम्प १९९० लाई लिएर ब्रह्मशमशेरले लेखेको पुस्तकबाहेक अरू संगठित तवरमा त्यस्तो सामग्री पाइएन । कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, बालकृष्ण समका केही फुटकर कविता पाइएका छन् । हो, साहित्यमा कविता वा निबन्ध पछिल्लो समयमा प्रशस्तै लेखिएका छन् । तर, यही विपत्तिले ल्याएको विचलन र सांस्कृतिक पक्षमाथि अध्ययन हुनै बाँकी छ । म अहिले भूकम्पपछिको साहित्य, साहित्यिक विशेषांक, अर्काइभसहितको संग्रहमा लागेको छु ।
विशेषत: कुनै घटनापछि रिसर्चरहरू अलिकति पैसा र योजना लिएर अनुसन्धानमा लागिहाल्ने यो फेसन हो कि साँच्चिकै अध्ययन हो ?
कतिपयका कतिपय काम फेसन पनि होला । तर, हाम्रो हकमा भने भिन्न कुरा छ । सन् २००१ को गुजरातमा गएको महाभूकम्पमाथि एडवार्ड सिम्पसन नामका बेलायती लेखकले ‘द पोलिटिकल बायोग्राफी अफ एन अर्थक्वेक’ नामको कृति लेखेका थिए । मैंले त्यो पढेर पनि भूकम्पजस्तो विपत्तिमाथि फरक दृष्टिकोण बनाउन सकें । गुजरातमा भूकम्प विपत्तिपछिको सामाजिक र राजनीतिक संकटमाझ नरेन्द्र मोदीजस्ता नेताको उदय भएको थियो भन्ने व्याख्यान यो पुस्तकमा छ । म भने भूकम्पपछिको नेपाली साहित्य र विशेषत: कवितात्मक प्रतिक्रियालाई बढी हेर्दै छु । विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाको भूकम्प विशेषांक पनि अध्ययनमा लागेको छु । नेपालका सन्दर्भमा धरहरा ढलेपछि नेपाली जनसाधारणको भावनात्मक संवेग र आवेग पनि अरू ‘सिम्बोल’ का तुलनामा निकै गहिरो थियो । भूकम्पलगत्तै ‘ढल्यो रे नि धरहरा’ शीर्षकमा सरला गौतमले खलंगा डेटलाइनमा ‘कान्तिपुर’ को ‘कोसेली’ मा लेखेको लेखमा त्यो ‘सिम्बोल’ दूरदराजबाट पहिलोपटक गतिलो गरी उत्रिएको थियो । गाउँघरबाट काठमाडौं आउने भनेकै धरहरा हेर्न जाने भन्ने सोचाइ हुन्थ्यो । हो, यहाँ काष्ठमण्डप, रानीपोखरी सबै क्षतविक्षत थिए तर मानिसहरू धरहरा मात्रै सम्झिरहेका थिए । जस्तो, लेखनको कुरा गर्दा ‘केही निश्चित समयसम्म भूकम्पले हामीलाई साम्यवादी बनाएको छ । थाहा छैन, पछि के होला’ भन्ने थिममा कविता–साहित्य लेखिने क्रम बढेको थियो । यो विषयमा अध्ययन र अभिलेखीकरण महत्त्वपूर्ण हुने ठानेर हामी लागेका छौं ।
तपाईंले बेलायतको प्रतिष्ठित प्राज्ञिक निकायमा बसेर नेपाली भाषा–साहित्यको प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । यसको पहिचान र नाम आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै हो कि यही आधारमा तपाईंलाई बाहिरी दुनियाँमा समेत चिन्नेहरू छन् ?
यसरी सबैतिर एकोहोरो हातलागी (अथवा उपलब्धि) मात्रै खोजेर पनि हुँदैन । विश्वविद्यालयमा पढाउने भएपछि अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने स्वभाव हुर्काउनैपर्छ । यो कर्तव्य पनि हो । त्यसअन्तर्गत निश्चित विषय, क्षेत्र र प्राथमिकता मैंले रोजेको हुँ । यस क्रममा ३० वर्षयता नेपाल आइरहेको र यहाँको मिलिजुली स्वभाव, आत्मीयता र साहित्यकारहरूसँगको निकटताले मलाई नेपाल–नेपालीबाट कहिल्यै टाढा हुनै दिएन । मलाई खुबै माया लाग्छ नेपालको, नेपाली भाषा र नेपाली मिजासको पनि । नेपाली भाषा–साहित्यको विद्यार्थी बनेर र अध्येता बन्न खोजेर मलाई बाहिरी दुनियाँमा कसले, कति चिन्छ भन्ने मलाई मतलब रहन्न । म आफ्नो खुसीको र रुचिको काम गरिरहेको छु ।
अहिले भूकम्पपछिको यो योजनाबाहेक अरू के काममा लाग्नुभएको छ ?
हो, म आफ्नै रुचिमा बुद्धिसागरको ‘कर्नाली ब्लुज’ लाई अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दै छु । यसको आधाजति पहिलो ड्राफ्ट सकिसकेको छु । तर, उपन्यासमा अलिक फरक लवज र भाषा भएकाले लेखकसँग परामर्श गर्न बाँकी छ । यसअघि, पारिजात, लेखनाथ, देवकोटा, मोहन कोइराला, बैरागी काइँला, गुरुप्रसाद मैनाली, भवानी भिक्षु, बीपी कोइराला, प्रेमा शाह, राजव, लीलबहादुर क्षत्रीलगायतका स्रष्टाको रचनाकृति अनुवादमा ल्याइसकेको हुनाले पनि नेपाली भाषा–साहित्य, लेखनमा रस बसेको छ ।
हो, झन्डै तीन दशकयताको अनुभवमा के फरक आयो त नेपाली साहित्यमा ? ‘बसाइँ’, ‘नासो’ अथवा आजको लेखाइका कुरामा ?
यो त एकदमैं टड्कारो देख्न सकिने कुरा हो । अहिलेको साहित्यले बाहिरी संसार हेर्न थालेको छ, स्टाइल अथवा विषय ग्लोबल बन्दै छ, डिजिटल र ‘भर्चुअल वल्र्ड’ को प्रवेश भएको छ । आज भिन्न विधाहरू संयोजन पनि हुन थालेको छ, जस्तो— पत्रकारिता, साहित्य, अनलाइन मिडिया आदि । म आफ्नो कक्षाकोठामा सधैंजसो दुईवटा नेपाली कथाको ‘रिफर’ गरिरहेको हुन्छु । एउटा गुरुप्रसाद मैनालीको ‘परालको आगो’ र अर्को राजवको ‘घरदेखि सडकसम्म’ । एउटामा नेपाली गाउँको र घरसमाजको चित्र–चरित्र उत्रन्छ भने अर्कोमा सहरको समाज देखिन्छ । गाउँको समाजमा सबैले एकअर्कालाई चिन्छन्, सबै एकअर्कामा आत्मीय लाग्छन् । तर, सहरको समाजमा सबै जना एकअर्कोसँग बिरानोझैं छन्, पूरै अपरिचित । हो, हिजो र आजको मूलभूत हेरफेर भनेकै यही हो । समय जसरी बदलिएको छ, साहित्य–सिर्जना र रचना उसैगरी फेरिएको छ ।
ठीक छ, यो बिषयगत परिवर्तन त बोध गर्नुभयो । तर, साहित्यिक स्तर र गुणवत्तामा के हेरफेर छ ?
यसरी तुलना गर्न मिल्छ पनि, मिल्दैन पनि । मदन पुरस्कार पाएकै पारिजातको ‘शिरीषको फूल’ (२०२२) र नारायण वाग्लेको ‘पल्पसा क्याफे’ (२०६१) लाई कसरी एउटै तराजुमा राख्ने ? ‘शिरीषको फूल’ को तुलना (साहित्यिक स्तर) मा ‘पल्पसा क्याफे’ लाई राख्नै मिल्दैन । तर, ‘पल्पसा क्याफे’ ले नेपाली साहित्यमा व्यावसायिक बिक्री–वितरण र बजारको विस्तार गर्नमा पुर्‍याएको योगदान भुल्नै मिल्दैन । धेरैजसो बूढाबूढी–पाठकमा सीमित नेपाली साहित्य युवायुवती–पाठकमाझ उतार्ने काम यही ‘पल्पसा क्याफे’ ले गरेको हो । अर्कातिर अनौठो कृति हो ‘शिरीषको फूल’ जहाँ विषयवस्तु र दर्शन पनि गजबको छ । तर, एउटा कुरा मैले ‘फिल’ गरेको छु नेपालमा लेखकभन्दा पत्रकारको आयआर्जन र आर्थिक स्तर राम्रो हो कि जस्तो लाग्छ । यो गलत पनि हुन सक्छ । तुलनाको कुरा गर्ने हो भने पहिलेको नेपाली साहित्य लेखन वा प्रकाशन स्वान्त सुखाय: भनेजस्तै थियो, आफ्नै सानो सर्कलका लागि । अहिले त सिकारु लेखकले पनि अनेक ग्लोबल/डिजिटल विषय, प्लेटफर्म पाउने अवस्था छ । अर्को कुरा, धेरैले चर्चामा ल्याउने ‘विशुद्ध लेखक’ को परिभाषा पनि मैंले बुझ्न सकेको छैन । एउटा मोहन कोइराला अथवा अर्को भूपी शेरचन ‘लेखक मात्रै भए’ भन्दैमा आम रूप र समग्रमा ‘विशुद्ध लेखक’ को आयाम कसरी पहिल्याउने र ?
तपाईंले नेपाली भाषा–साहित्यको अध्येता भएर के पाउनुभयो अथवा यो पनि स्वान्त सुखाय मात्रै हो ?
हेर्नुहोस्, म सन् १९७८ मा पहिलोपटक नेपाल आएको थिए । साहित्यिक सोखमा भने १९८७ देखि यहाँका कविलेखक भेट्न थालेको हुँ । त्यसबेला पारिजात, मोहन कोइराला, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, केदारमान व्यथित, वानीरा गिरी, विश्वविमोहन श्रेष्ठ, बैरागी काइँला आदिलाई भेटेको थिएँ । तर मलाई माइकल हट भनेर साहित्यिक सोखिनका रूपमा कसले चिन्थ्यो र ? त्यसबेला त्यही एउटा ‘कुहिरे माइकल’ मात्रै भन्थे । आज म कम्तीमा नेपाली साहित्यिक र भाषिक सर्कलमाझ अलिअलि चिनिन थालेको छु । हो, नेपालमा विदेशी अनुसन्धानकर्ताको कमी छैन । तर, नेपाली साहित्यमा लगातार अध्ययन–अध्यापनमा लागिरहेको भने म मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ । यसरी मैंले संगत गर्न र आफूमा थोरबहुत निखार खोज्न पनि उपयुक्त समय पाएँ । मेरो पालामा युनिभर्सिटी फन्डिङ पनि राम्रो थियो । अहिले भने यस्तो फन्डिङ पाउनै गाह्रो छ । यसकारण, के पाएँ र के गुमाएँ भनेर लेखाजोखा गरिरहनुभन्दा पनि अहिले नेपाल–नेपाली मेरो सोख र अभिरुचिको विषय बनिसकेको छ ।
तपाईं लगातारजसो नेपाली कविता, कथा, उपन्यासको अंग्रेजी अनुवादमा पनि लाग्नुभएको छ । नेपाली मूल कृति र अनुवादमा उत्तिकै राम्रो कुन लागेको छ ?
अनुवादका काममा मञ्जुश्री थापाकै काम राम्रो लाग्छ । ‘द कन्ट्री इज युवर्स’ सँगालो निकै राम्रो छ । यस्तो बिरलै उदाहरणबाहेक अरू धेरैका हकमा ‘नेपाली पाठककै लागि मात्रै अनुवादको काम गरिएको हो कि’ जस्तो लाग्छ । अरू भन्नाले अंग्रेजीमा पढ्न चाहने वा बाहिर बस्ने अरू नेपालीका लागि गरिएको अनुवाद भन्न खोजेको हुँ अर्थात् अंग्रेजी पढ्न सक्ने नेपालीका लागि गरिएको अनुवाद । अथवा अझ भनौं, अनुवाद काठमाडौंका लागि मात्रै भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गएर बाहिरी पाठकका लागि गरिएको अनुवाद रियल सेन्समा एकदमै कमै छ । उदाहरणमा ‘मुनामदन’ नै हेरौं न । कति धेरै जनाबाट यसको अनुवाद भैसकेको छ । मैले गरेको ‘मुनामदन’ अनुवाद साझा प्रकाशनबाटै आएको छ । तर, एउटा राम्रो अनुवाद निस्किएको छ भने किन त्यही कृतिको अर्को अनुवाद गरिरहने ? यो बुझिनसक्नु छ । अब ‘शिरीषको फूल’ कै अनुवाद हेरौं न । कहाँको अनुवाद हो— ‘शिरिषको फूल’ भनेको ‘ब्लु मिमोसा’ भनेर ? यो फूल ‘ज्याकरन्डा’ हो । यसरी अनर्थ त गर्नुभएन नि ।
जहाँसम्म भर्खरै आएको ‘आज रमिता छ’ उपन्यासको अनुवादको कुरा छ, आईबी राईको साहित्य आफैंमा धेरै उच्च कोटीको छ । यो साहित्य कतिसम्म अंग्रेजी अनुवादमा उत्रन सक्छ भन्न धेरै गाह्रो छ । यो उपन्यास नेपाली पाठकका लागि लेखिएको हो, यसभित्रको प्रयोगको अंश र सांस्कृतिक सन्दर्भहरू निकै अर्थपूर्ण छन् । अनुवादक मञ्जुश्रीले यो सन्दर्भमा अनुवादमा केही कुरा थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पाठकलाई बुझाउन । ग्लोसरी, अथवा छुट्टै ‘इन्ट्रोडक्सन’ जरुरी देखिएको छ । हो, राम्रो नेपाली उपन्यासको अंग्रेजी अनुवाद भएको छ तर, राम्रो नेपाली उपन्यासको ‘राम्रो अंग्रेजी अनुवाद’ भएको छ अथवा छैन, म भन्न सक्दिनँ । ‘फेथफुल ट्रान्सलेसन’ ले मात्रै यो कृति बाहिरी संसारमा बुझाउन सकिन्न भन्ने लाग्छ ।
गरिरहेको कामबाहेक नेपालमा हुन नसकिरहेको शोध–अनुसन्धानको क्षेत्र अथवा विषय के हुन सक्छ ?
हो, यही विषयमा मञ्जुश्री थापाले ‘ललित’ पत्रिकामार्फत उठाएको सरोकार पनि चाखलाग्दो थियो । नेपालको अरू भाषाको साहित्यमा कसैले अध्ययन–अनुसन्धान गरेको छैन । मञ्जुश्रीको जस्तै मेरो रुचि पनि त्यतातिर छ । लिम्बु, तामाङ, मैथिली, भोजपुरी आदिमा के–के लेखिंदै छ, त्यो पनि खोजीको विषय हुनुपर्ने हो । यो हुन सकेको छैन । यो विषय सरोकारमा राख्दा केही साथी नेपाली समाज संक्रमणमा गुज्रिएको र केही समयपछिको सामाजिक–राजनीतिक स्थिरताले यस्तो विविध अध्ययन–अनुसन्धानलाई सघाउ पुग्ने मलाई बताइरहेका हुन्छन् । तर, मेरा बुझाइमा सधैंको संक्रमण यस्तै हो । हरेक दिन संक्रमणमा बित्छ । मेरो बेलायती समाज पनि सधैंसधैं यस्तै संक्रमणमाझ गुज्रिएको छ । बरु एउटा सकारात्मक कुरा गरौं— संक्रमण र बन्देजको । जस्तो, वाक स्वतन्त्रता नरहेको घडीमा लेखनको स्तर र गतिशीलता बढ्दो रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ । त्यस्तो बेलामा लेख्नै परेमा पनि धेरै सोचेर र प्रतीक–उपमाको पनि ख्याल गरेर उपयोग गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । यसो भनेर वाक स्वतन्त्रता ठीक होइन भन्न खोजेको अर्थ नलागोस् ।
हट लागि उत्कृष्ट कृति
‘हामी’ र ‘मेरो चोक’ (भूपी), ‘पागल’ र ‘माघको खुलेको बिहानको जप’
(देवकोटा), ‘मातेको मान्छेको भाषण’ (बैरागी काइँला), ‘म तिम्रो छोरीलाई प्रेम गर्छु’ (मोहन कोइराला), ‘जाडो’ (श्रवण मुकारूङ), साला पहाड मे क्या है ? (मीनबहादुर विष्ट), ‘देवीमाया’ र ‘भैरवहामा हिउँ’ (श्यामल)
‘परालको आगो’ (गुरूप्रसाद मैनाली), ‘मैंले नजन्माएको छोरो’ (पारिजात), ‘एक दिनको सामान्यता’ (आईबी राई), ‘अर्धमुदित नयन र डुब्न लागेको घाम’ (शंकर लामिछाने) ‘घरदेखि सडकसम्म’ (राजव)
‘शिरीषको फूल’ (पारिजात), ‘तीन घुम्ती’ (बीपी कोइराला), ‘कर्नाली ब्लुज’ (बुद्धिसागर)
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ ०८:४१
बोल्न धेरै गाह्रो छ
सविता विमली कार्तिक ३, २०७६
बोल्न सजिलो छैन । कसैको विरुद्धमा आवाज उठाउन त झनै गाह्रो छ । अझ एउटा निरीह व्यक्तिले आफूमाथि अन्याय भयो भन्न सक्दै सक्दैन । बोलिहाले पनि उसको आवाज...
चीनको उदय : अनुमान र यथार्थ
लोकराज बराल कार्तिक ३, २०७६
चीनका विषयमा अनेक चर्चा र अनुमानित विश्लेषण भइरहेको छ । विश्व राजनीतिमा चीनले सधैं मान्यता पाउँदै आएको हो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघ गठन हुँदा...
प्रतिस्पर्धाभन्दा समन्वय र सहकार्य
खगेन्द्रप्रसाद रिजाल कार्तिक ३, २०७६
प्रख्यात राजनीतिशास्त्री रोबर्ट ए. डाह्ल भन्छन्— कुनै देशमा जनसंख्याको वृद्धि हुँदै जाँदा प्रशासनिक सहजताका निमित्त जनताले केन्द्रीय सरकारका अलावा प्रशासनका अतिरिक्त एकाइहरूको आवश्यकता बोध गर्छन् ।...
आहुति कार्तिक ३, २०७६
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दशकौंदेखि आदर्शवाद (आइडिअलिज्म) वा धर्मवादको विकल्पका रूपमा भौतिकवादको पक्षमा जुटेका, त्यसैमा आधारित राजनीतिका निम्ति अकल्पनीय कष्टहरूसमेत व्यहोरेका र भौतिकवादी दार्शनिक प्रणालीको व्याख्याता...
प्रधानमन्त्रीले लिएको बाटो
सम्पादकीय कार्तिक ३, २०७६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुरमा शनिबार प्रकाशित आफ्नो अन्तर्वार्तामा मुलुकको वैदेशिक सम्बन्ध, सरकारको कार्यशैली, नेकपाको अपूरो एकीकरण र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको संशयपूर्ण सम्बन्धबारे...